भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, फोटोमा थिचेर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस् ! – Khabar Silo
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, फोटोमा थिचेर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस् !
Posted on November 3, 2020 Author khabar silo Comment(0)
यी ४ राशिको कहिले पनि छोडदिनन् लक्ष्मीले साथ ! धनको भैरहन्छ वर्षात !
Posted on November 28, 2020 Author khabar silo
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी ४ राशीप्रति धन कि देवी लक्ष्मी बढी दयालु देखिने गर्छिन । १२ राशी मध्ये यी ४ राशीका मनिसहरुले प्रसस्थ धन कमाउन सक्छन् । यी राशिका मान्छेहरुलाई जीवनभर महलक्ष्मीको आशिर्वाद मिल्ने हुदा आयआर्जन रामो हुने गर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरुले घरमै बसीबसी धन कमाउछन् भन्ने छैन तर थोरै परिश्रमबाट नै सोचेभन्दा बढी कमाउने […]
Posted on October 30, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं– आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्दछन् । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआराधना गरे घरमा धनका साथै समृद्धि हुने धार्मिक विश्वास गरिन्छ । माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आराधना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । जसले जीवनभर तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यो दिन व्रत […]
काठमाडौ । मासिका सबै कुरा उसको जन्मदिनमा आधारित रहेर तय हुन्छ । जन्मदिनका आधारमा उसको राशि निर्धारित हुन्छ । राशि अनुसार कुन मानिस कस्तो ? उसेले के के गर्न सक्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । यो यस्तो विज्ञान हो जसले भूत, बर्तमान र भविष्यका आँकलन गर्न सक्छ । आज हामी धनसम्पति कमाउने राशिका बारेमा भन्दैछौ । […]
काठमाडौँका कुन कुन ठाउँमा हुँदैछ भोलि विद्युत सेवा अवरुद्ध ?
संक्र’मण ब’ढ्न थालेपछि अब फेरि १४ दिन लकडाउन गर्न सरकारको आग्रह !